TOP 10: Tobanka Xiddig Ee Ugu Waa Weyn Ee Bisha Janaayo La Iibsan Doona Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda | Laacibnet.net
TOP 10: Tobanka Xiddig Ee Ugu Waa Weyn Ee Bisha Janaayo La Iibsan Doona Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda
Suuqa kala iibsiga qaboobaha ee 2020 ayaa shaki la’aan noqon doona mid qeyrul caadi ah laakiin xiddigo waa weyn ayay kooxaha la wareegi karaan bisha soo socota.
Waxaan eegi doonaa tobanka xiddig ee ugu waa weyn ee lala wareegi karo bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Madaama uu qaab ciyaareedkiisa hoos ugu dhacay, Isco ayaa u baahan inuu koox bedesho si uu u helo fursad uu ku soo bandhigo tayadiisa, wuxuuna taas ka heli karaa Premier League iyadoo Arsenal iyo Everton ay ka mid yihiin xiddigaha lala xiriirinayo.
Mid ka mid ah xiddigaha ugu qaalisan dunida ee suuqa saaran, Paul Pogba ma uusan qarsanin baahida uu u qabo inuu baxo, laakiin si’aashu waxay tahay miyay Real Madrid ama Juventus u diyaarsan yihiin inay bixitaan lacagta ay dalbaneyso Manchester United iyadoo xilli ciyaareedka uu weli socdo.
Kaliya shan kulan ayuu ku soo bilowday 25kii kulan ee ay Tottenham ciyaartay xilli ciyaareedkan, Alli ayaa ogsoon in sida kaliya ee uu boos uga heli karo xulka England inay tahay inuu si joogta ah u dheelo, waxaana lala xiriirinayaa kooxda Paris Saint-Germain.
Lyon ayaa hoos u dhigtay qiimaheeda Depay tan iyo markii ay Barcelona ku guuldareysatay inay bixiso lacagtiisa xagaagii, weeraryahanka halista ah Memphis Depay ayaa bisha Janaayo waxa uu Catalonia kula midoobi karaa macalinkiisii hore Ronald Koeman.
Madaama laga saaray kooxda Napoli xilli ciyaareedkan oo dhan islamarkaana qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga, Milik ayaa lagu heli karaa qiimo jaban, waxaana si gaar ah u xiiseyneysa Atletico Madrid haddii Diego Costa uu baxo.
Waxaa mar loo arkayay xiddigihii mustaqbalka bedeli lahaa Jordi Alba, laakiin Firpo waa uu ku fashilmay Barcelona. Weli da’diisa waa 24 sanno jir sidaasi darteed koox kale waa uu isku soo saari karaa.
Kaliya sannad ka hore, heshiiska uu Christian Eriksen uga tagay Tottenham uguna wareegay Inter waxay aheyd midkii ugu weynaa suuqa kala iibsiga janaayo, laakiin isagoo kaliya ku soo bilowday hal kulan tan iyo bishii October, mar kale ayuu suuqa saaran yahay.
Da’diisa waa 27 sanno jir, Julian Draxler waxay aheyd inuu joogo waqtigii ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed laakiin dhaawacyo iyo hubanti la’aan mustaqbalkiisa ah ayaa u diiday inuu isku soo saaro PSG. Milyan, Inter iyo Juventus ayaa si dhow u la socda xaaladiisa.
Isagoo dib isagu soo dhisay Marseille, 27 jirkaan kubadsameeyaha ah ayaa qandaraaskiisa uu dhacayaa, waxaana lagu heli karaa kaliya 15 milyan euro bishaan Janaayo isagoo ka mid ah xiddigaha ugu qaab ciyaareedka fiican xilli ciyaareedkan.
Pep Guardiola Oo Si Rasmi Ah U Shaaciyay Mid Ka Mid Ah Xiddigihiisa Waa Weyn Oo Xilli Ciyaareedka Danbe U Dheeli Doona Barcelona
Shaxda Rasmiga Ah Ee Real Madrid vs Real Sociedad - Isco Iyo Mariano Oo La Safay & Xiddig Si Lama Filaan Ah Keyd Loo Geliyay
Koox Magac Weyn Ka Leh Yurub Oo Raadineysa Tababaraheedii SHANAAD Ee Xilli Ciyaareedkan & Xiddigii Arsenal Oo Sabab U Ah